Ku simha Madaxweynaha Somaliland Oo Qaabiley Sh. Shariif Makididi | Somaliland.Org
Ku simha Madaxweynaha Somaliland Oo Qaabiley Sh. Shariif Makididi
February 28, 2012	Hargeysa (Somaliland.Org)- Madaxweyne Ku xigeenka Somaliland ahna Ku simaha Madaxweynaha Md. C/Raxmaan Cabdilaahi Ismaaciil ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabiley wefti uu hoggaaminayay Sheekha caanka ka ah dunida islaamka ee dhalinyarada ah ee Shariif Makididi oo socdaal ku yimid magaaladda Hargeysa.
Ugu dambayntii waxa uu sheekhu halkaasi ka soo jeediyay duco aad u dheer oo uu Somaliland iyo bulshada ku dhaqan ugu duceeyay khayr isla markaana uu ILAAHAY uga baryay inuu sii adkeeyo nabad-gelyadooda. Weriye Cumar Maxamed Faarax
Previous PostSheekha mucjisada ah ee Shariif Makididi oo si weyn loogu soo dhaweeyay HargeysaNext PostMaayarka Hargeysa oo ka qeyb galay shir si weyn loogu faaqiday nidaaminta Suuqa dhexe ee Magaaladda	Blog